'In Aspirinka la isticmaalo maalin kasta waxay halis u tahay waayeelka' sida lagu sheegay daraasad - BBC News Somali
'In Aspirinka la isticmaalo maalin kasta waxay halis u tahay waayeelka' sida lagu sheegay daraasad
17 Sebtembar 2018
Image caption Isticmaalka Aspirin marka la duqoobo ayaa laga deyriyey
Dadka waayeelka ah ee uu caafimaadkooda fiican yahay waa in aysan isticmaalin kaniiniga Aspirin-ka maalin kasta, sida lagu sheegay daraasad ballaaran oo laga soo saaray Mareykanka iyo Australia.
Waxaa caddeymo loo helay in daawadaas ay wax u tarto dadka uu ku dhacay wadne xanuunka iyo kuwa uu hayo xanuunka faaligga.
Laakiin daraasaddan ayaa lagu ogaaday in uusan kiniinkaas wax faa'iido ah u lahayn dadka caafimaadka qaba ee ay da'doodu ka korreyso 70-ka sano, waxayna daawadaas kordhisaa halista ku saabsan inuu qofka ku dhaco dhiig bax gudaha ah oo dhimasho sababa.
Khubarada ayaa natiijada ay soo saareen ku qeexay in ay tahay mid aad muhiim u ah waxayna ka digeen inuu qofka si iskiis ah isugu daaweeyo Aspirin-ka.
Dadka ayaa loo qoraa kaniinigaas ka dib marka ay ka xanuunsadaan wadnaha ama ay dhiigkar qabaan, sababtoo ah wuxuu furfuraa dhiigga si uu u yareeyo awoodda xanuunnadaas.
Dadka uu caafimaadkooda sida buuxda u dhameystiran yahay ayaa kaniinigaas u isticmaala si ay uga hor tagaan khatar soo wajihi karta, waxaana jirta daraasad aan wali la dhammeystirin oo lagu sameynayo in kaniinigaas loo isticmaali karo yareynta halista ku aadan cudurka cancer-ka.
Hase ahaatee inta badan cilmi baarista lagu sameeyo Aspirin-ka ayaa loo adeegsadaa dadka da' dhexaadka ah waxaana caddeyn buuxda loo hayaa in daawadaas ay khatar u tahay dadka marka ay sii weynaanayaan.
'Faa'iido ma laha'
Daraasaddaan ayaa lagu sameeyay dad ay tiradooda gaareyso 19,114 ruux oo ku sugan Mareykanka iyo Australia isla markaana ay da'dooda ka sarreyso 70 sano.
Kala bar ka mid ah dadkaas ayaa maalin kasta hal xabo oo Aspirin ah la siinayay muddo shan sano ah.
Saddex war bixin oo lagu daabacay wargeyska arrimaha caafimaadka ka faallooda ee New England Journal ayaa lagu muujiyay in kaniinigaas uusan yareynin khatarta uu qofka ugu jiro cudurka wadne xanuunka, waxaana la ogaaday inuusan wax faa'iido ah oo kalena u lahayn.
Image caption Aspirinka oo degdeg loo joojiyo ayaa laga deyrinayaa
Waxay kordhiyeen xaddiga dhiig baxa weyn ee dhanka caloosha.
Prof. John McNeil, oo ka tirsan jaamacadda Monash ayaa yiri "Tani micneheedu wuxuu yahay in haddii malaayiin qof oo waayeel ah, caafimaadkooduna uu fiican hayay, ay daawadaas u isticmaalaan sabab caafimaad la'aanteed aysan waxba ka faa'iideynin, sababtoo ah daraasaddu waxay muujisay in aysan jirin wax uu ka tarayo halista ku saabsan dhiigbaxa dhanka caloosha.
"Natiijooyinkan waxay caawinayaan dhaqaatiirta oo muddo dheer aan kala hubi jirin sida ay u fiican tahay in Aspirin-ka lagula taliyo dadka caafimaadka qaba."
Prof. Peter Rothwell, oo ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa isagana sheegay in natiijadan ay tahay mid wax ku ool ah.
"Sidoo kale qof walba oo muddo dheer isticmaalayay dawadaas yuusan ku joojinin hal habeen, maadaama uu taas dhib uga imaan karo. Ha kala tashadaan dhaqtarkooda", ayuu yiri Prof Rothwell.